May 16, 2021 - Cele Fans
May 16, 2021 Cele Fans Comments Off on နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ဆိုပြီးမိခင်ဖြစ်သူနှင့်အစ်ကိုအရင်းတို့မှစွန့်လွှတ်လိုက်ပါပြီတဲ့
ကြၽန္ေတာ္သည္ကနီသားမိဘႏွစ္ပါးမွ ကနီၿမိဳ႕တြင္ ေမြ.းဖြာ.းႀကီးျပင္းခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ယခုအထိနိုင္ငံေရးႏွင့္လူမႈ႔ကူညီေရးကိုသာတတ္စြမ္းသေ႐ြ႕ကနီမွာပင္ျပဳလုပ္လာခဲ့ရာ ကြၽန္ေတာ္၏မိခင္ႏွင့္အစ္ကိုမွာႏွစ္သက္မႈ႔မရွိခဲ့သျဖင့္ ျပႆနာမ်ားစြာ ႀကဳံခဲ့ရၿပီးအိမ္မွာ ​ေနထိုင္မႈ႕မရွိခဲ့သည္မွာမ်ားစြာၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ (ဖခင္မွာဆုံ.းပ.ါးၿပီးျဖစ္သည္) ယခုေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလတြင္လည္းတတ္စြမ္းသေ႐ြ႕ပါဝင္ခဲ့သျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္အားပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတ.ားျမ.စ္ခဲ့ေသာ္လည္းမရသျဖင့္ယေန႔တြင္ ကြၽန္ေတာ္၏ မိခင္ႏွင့္အစ္ကိုတို႔မွ“ သားသမီးအျဖစ္မွ၊ ညီအျဖစ္မွစြ.န့္လြ.တ္ေၾကာင္း၊ အိမ္ႏွင့္လုံးဝမပက္သက္ေတာ့ေၾကာင္း” ဖုန္းဆက္လာသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ၾကည္ျဖဴစြာလက္ခံလိုက္သည္။ ကိုယ္ယုံၾကည္ရာလမ္းကိုဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းတဲ့ေနရာမွာ ဘဝသံသရာတစ္ေကြ႔မွဘယ္ေႏွာင္ႀကိဳးကိုမွ် အေရာင္မဆို.းလိုပါ။ ကြၽန္ေတာ္အိမ္က မိခင္အစ္ကိုတို႔မွစြ.န့္လြ.တ္ပါေစဒါဟာအေရးသိပ္မႀကီးဘူး ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးနကၡတ္စုံခ်ိန္မွာဒီမိုကေရစီရရွိေရးဟာပိုအေရးႀကီးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံ ေ. သြးျဖင့္ေရးေသာနိုင္ငံေတာ္ေ. သြးပင္လယ္ထဲျမဳပ္ေမ်ာေမ်ာမယ့္ဒီမိုကေရစီမျဖစ္ေရးအတြက္အေရးေတာ္ပုံ ​ေအာင္သည္အထိအတူတကြရင္ဘတ္တူသူမ်ားႏွင့္လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားမည္။ဒီပိုစ့္ကိုတင္ရတာကအမ်ားအသနားခံခ်င္၍ အကူအညီေပးေစလို၍ […]
May 16, 2021 Cele Fans Comments Off on မုန်တိုင်းတစ်လုံး မေလတတိယပတ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်
မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ရက်အချိန် ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သောမုန်တိုင်းတစ်လုံး မေလတတိယပတ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမိုးကြို/မိုးဦးခန့်မှန်းချက်မှာ ကြိုတင်ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ယခင် ခန့်မှန်းချက်ထက်၃ရက်လောက်နောက်ကျပြီးမှဖြစ်လာမှာမို့ အနီးကပ်updateသတင်း ထပ်မံထုတ်ပြန်ပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်း ကိုကိုးကျွန်း၏အနောက်ဘက်တွင် ယခုမေလ ၂၂-၂၃ရက်နေ့တွင် လေထုမငြိမ်သက်မှုဖြစ်ပေါ်လာရာမှ မေလ ၂၄ နေ့တွငလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခု အဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းဟာ ဆက်လက်အားကောင်းလာပြီး မေလ ၂၅ရက်နေ့မှာ မုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းတွက်ချက်ရရှိထားပါတယ်။ မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းအနေနဲ့ကတော့ မြောက်(သို့)အနောက်-မြောက်ဘက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရဲ့ အရှေ့တောင်ဘက်ကိုဦးတည်ရွေ့လျား သွားနိုင်တယ်လို့တော့ ကနဦး […]
May 16, 2021 Cele Fans Comments Off on ဘာကြောင့်ဘဏ်ထဲကငွေတွေ ပြန်ထုတ်သင့်သလဲဆိုတာ ဘဏ်ဝန်ထမ်းဟောင်းတစ်ဦးရဲ့ ပြောကြားချက်
ဘာကြောင့်ဘဏ်ထဲကငွေတွေ ပြန်ထုတ်သင့်သလဲဆိုတာကို အကြောင်းအရင်းခိုင်လုံစွာနဲ့ရှင်းပြလာတဲ့ ဘဏ်ဝန်ထမ်းဟောင်းတစ်ဦးရဲ့ ပြောကြားချက် ဘာကြောင့် ဘဏ်ထဲကငွေတွေ ပြန်ထုတ်သင့်သလဲ ကိုနေနိုင်ထွန်း (ဘဏ်ဝန်ထမ်းဟောင်း) ဘဏ်အပ်ငွေ အကုန်ပြန် ထုတ်ထားကြပါ ။ ဘာကြောင့် ငွေတွေ အကုန်ထုတ်သင့်သလဲဆိုတာ ဘဏ်ငွေကြေးစနစ် ကျွမ်းကျင်သူ ပြောပြတာလေးကို ပြောပြပါ့မယ် … ပြည်သူများအနေနဲ့ မိမိတို့ပိုင်ငွေတွေကို ဘဏ်တွေက ဘာကြောင့် ကိုယ်လိုချင်သလောက် မထုတ်ပေးနိုင်သလဲဆိုတာ ဘဏ်တွေထဲမှာ ဗဟိုဘဏ် အပါအဝင် ငွေကြေးပျက်လပ်နေပြီတဲ့သဘောပါ။ ဘဏ်တွေဟာ အပ်ငွေတွေကို စီးပွားရေး […]
May 16, 2021 Cele Fans Comments Off on ရဲအရာရှိတစ်ဦးရဲ့ သမီးဖြစ်နေလို့ တရုတ်ကျောင်းသူတစ်ဦးရဲ့ ဗီဇာကို ငြင်းပယ်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်
အမေရိကန်မှာ ပညာသင်ကြားဖို့အတွက် ဗီဇာလျှောက်ခဲ့တဲ့ တရုတ်ကျောင်းသူတစ်ဦးဟာ ပယ်ချခံလိုက်ရတယ်လို့ အမေရိကန်သံရုံးက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါကျောင်းသူရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူဟာ ရဲတွေအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေသူဖြစ်တာကြောင့် ပယ်ချခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်း အကြောင်းပြချက်ပေးခဲ့ပြီး ဒီကိစ္စကို ပညာရေးကုမ္ပဏီဘက်ကနေ ဖြေရှင်းပေးနေတယ်လို့ South China Morning Post က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသားဘက်ကို ပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကြားစာမှာ ထောက်လှမ်းရေးရဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဌာနလေးခုက အကြီးတန်းအရာရှိတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကို ဗီဇာထုတ်ပေးခြင်းကလည်း ဆိုင်းငံ့ထားကြောင်း ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပညာရေးကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ ကျောင်းသူရဲ့ […]
May 16, 2021 Cele Fans Comments Off on “တောင်သူတွေရဲ့ အကြွေးတွေကို လျှော်ပေးခဲ့ပြီးနောက် ထီ သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီး ပေါက်ခဲ့သူ”
သာဓု သာဓု သာဓု ယခုလသိန်း(၁၅၀၀၀)ပေါက်တဲ့သူဟာ ထီမပေါက်ခင်ကတည်းက တောင်သူများအပေါ် ရစရာရှိတဲ့ အကြွေးတွေကို လျှော်ပေးခဲ့သူ တစ်ဦးပါ တောင်သူတွေဆီက ရစရာရှိတဲ့ အကြွေးတွေ ပေးစရာမလိုတော့ကြောင်း သူ့အကောင့်မှာ ခုလို တင်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ် ကိုဗစ္ ကာလ တောင်သူဦးကြီးများ၏ အခက်အခဲကို စာနာသောအားဖြင့် ကျွန်တော်များ ပဲခူးမြို့ အရောင်းဆိုင်မှ ကိုယ်ပိုင်အကြွေးရောင်းချထားသော လယ်ယာသုံးထွန်ကိုင်းဒီဇယ် / ဓာက်ဆီအင်ဂျင်အပိုပစွည်းများအတွက် ပဲခူးဆိုင်သို့ ပေးသွင်းရန် ကြွေးမြီများအား လုံး လုံးဝ( […]
May 16, 2021 Cele Fans Comments Off on သူတို့လက်အောက်မှာ သွားလည်းမကစားစေချင်ဘူး”
“ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက ဖွံ့ဖြိုးဆဲပဲရှိသေးတာ။ အခု အာဏာသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့အပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ကတော့ နိုင်ငံရေးနဲ့အားကစားကို ရောယှက်စေချင်တယ်။ သူတို့လက်အောက်မှာ သွားလည်းမကစားစေချင်ဘူး” “စစ်ကောင်စီရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာတော့ နောင်နှစ်တစ်ရာတိုင်တောင် အာဆီယံလယ်ဗယ်မှာ ခေါင်းမော့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး” မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ဘောလုံးအသင်းဟာ လာမယ့် မေ ၂၈ ရက်မှာကျင်းပမယ့် ၂၀၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲနဲ့ ၂၀၂၃ အာရှဖလား ခြေစစ်ပွဲတွေမှာ ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ဒီသီတင်းပတ် ကုန်ပိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထွက်ခွာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမား တချို့ […]
May 16, 2021 Cele Fans Comments Off on ဂွကမ်းခြေတွင် ၁၉ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့် ဆရာဝန်တစ်ဦးအပါအဝင် သုံးဦးရေနစ်သေဆုံး
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဂွမြို့နယ် ကြွေဂျိုင်ကမ်းခြေတွင် အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးနှင့် ဆရာဝန်တစ်ဦး အပါအဝင် အခြားတစ်ဦးတို့ ရေကူးနေရင်းကနေ ရေနစ်မြုပ်ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဂွမြို့နယ် ကြွေဂျိုင်ကမ်းခြေတွင် မေ ၁၄ ရက်နေ့ ညနေပိုင်း ၅ နာရီဝန်းကျင်လောက်က မိသားစု ၃ ဦးကမ်းခြေတွင် ရေဆင်းကူနေစဉ် အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်မှာ ရေနစ်နေစဉ် ဆရာဝန်ဖြစ်သူနှင့် အခြားတစ်ဦးတို့မှာ သွားရောက်ကယ်ဆယ်ရာကနေ သုံးဦးစလုံးရေနစ် သေဆုံးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဂွမြို့နယ် […]
May 16, 2021 Cele Fans Comments Off on ရွှေဘိုမြို့မဈေး မီးလောင်ခြင်းနောက်ကွယ်က ဖြစ်ရပ်မှန်
သားငါးတန်း ထဲက ခြင်း ထဲက ကြက်ကလေး တွေဆို ဘယ်လို မှ ထွ က် မ ပြေး နိုင် ပဲ အ ရှ င် လ တ် လ တ် မီးလော င် ကျွ မ်း ခံရတာပါ။မျက်မြင် တွေ့ရသူ တစ်ဦး က မနက် နှစ်နာရီ မှာ လော […]
May 16, 2021 Cele Fans Comments Off on နောက်ဆုံးအချိန်အထိမင်းတပ်မြို့လေးကို ခုခံကာကွယ်ပေးရင်းနဲ့ပဲ ကြွေလွင့်သွားခဲ့ရတဲ့ သူရဲကောင်းလေးအကြောင်း
နောက်ဆုံးအချိန်အထိတိုင်အောင် မင်းတပ်မြို့လေးကို အစွမ်းကုန် ခုခံကာကွယ်ပေးရင်းနဲ့ပဲ ကြွေလွင့်သွားခဲ့ရတဲ့ သူရဲကောင်းလေးအကြောင်း လူစုခွဲဖြိုခွင်းမှုတွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နေရာအနှံ့အပြားမှာ ကျဆုံးသူတွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ များပြားလာခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီကာလအတွင်းမှာပဲ လူငယ်တွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေသာမက ငယ်ရွယ်သေးတဲ့ ကလေးငယ်တွေပါ အသက်ပေးခဲ့ရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ပြီးခဲ့တဲ့မေလ (၁၃)ရက်နေ့ကလည်း ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်မြို့မှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေခမျာ အင်အားသုံးဖြိုခွင်းမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ဒါကြောင့် မနေ့က မင်းတပ်မြို့မှာ လူငယ်တစ်ဦး ကျဆုံးသွားခဲ့ရတာ […]